दलान नेपाल : यसरी खोजीदै छन मधेश आन्दोलनको व्यवस्थापन सुत्र ।
गएको मंगलवार वेलुकी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संग भारतीय राजदुत रेको लामो छलफल भयो । त्यसको भोली पल्टै वुधवार दिउसो प्रचण्ड र मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु विच तीन घण्टा लामो छलफल भएको थियो । वुधवार मधेशी मोर्चाको नेताहरु संग अनौपचारिक भनिएको तीन घण्टाको छलफल पछि प्रचण्ड विहिवार प्रधानमन्त्री ओली संग तीन पटक भेटघाट गरेका छन । कतिपय भित्रियाहरुका अनुसार प्रचण्ड र ओली नेतृत्व वर्तमान गठवन्धन आन्दोलन अझै लम्बिए मुलुक नै ठप्प हुन सक्ने र काठमाडौमा हाहाकार नै मच्न सकिने भन्दै मधेशी मोर्चाको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा पछिल्लो समय अली लचकता देखाएका छन । उच्च स्रोत भन्छन, स्वयंम प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो पाच दिन यता भारतीय राजदुत रे संग हरेक वेलुकी बैठक गरीरहेका छन । त्यसै गरी प्रचण्ड र मोर्चाका शिर्ष नेताहरु विच छुटै साईड टकको एउटा श्रृख्ला चलीरहेको छ । ओली स्वयंम पनि मोर्चाका केहि शिर्ष नेताहरु सग पनि लागतार छलफल गरीरहेका छन । भारतीय राजदुत रे संग ओलीको छलफल सुरु भए पछि नयां दिल्ली वाट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको तर्फ वाट जारी व्यवस्थापनको सुत्र खोजीमा सहभागी हुन भाजपा नेता विजय जोली पनि काठमाडौ आई पुगेका छन । हिजो वुधवार राती मात्रै जोली र प्रधानमन्त्री ओली विच तीन घण्टा लामो छलफल भएको छ । जोली अन्य पक्षहरु संग पनि राजनितीक भेटघाटमा छन ।
के हुदै छ साइड टकमा
पछिल्लो समयमा सुरु भएको उच्च स्तरीय साइडटकहरुमा सहभागी नेताहरुका अनुसार वाहिर आए जस्तै मुख्य गरी संघियताकै विषयमा अहिले कसरी अघि वढने वारेमा छलफल भइरहेको छ । अर्को तर्फ प्रधानमन्त्री ओली यही निहुमा भारतीय पक्षलाई समेत आफनो तर्फ वाट सक्दो साकारात्मक वनाउन लागी परेको छ । ओलीले प्रष्ट रुपमा भारतीय राजदुत रे समकक्ष आफु जस्तो सुकै जोखिम उठाएर भए पनि मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताए पछि मात्रै दिल्ली वाट भाजपा नेता जोली काठमाडौ आइपुगेका हुन । हाल ओलीले हरेक दिन वेलुकी भारतीय राजदुतलाई यस सन्दर्भमा भएको गतिविधी र छलफल गर्न एउटा गोप्य स्थानमा भेटघाट गरीरहेका छन । ओलीले संघियताको सवालमा पुर्वमा आफु कोशी पारी जाने र पश्चिममा कैलालीको थारु वाहुल्य क्षेत्रलाइ मिलाउन तयार रहेको वताइसकेको वुझिइएको छ । तर ओली केहि आन्तरिक जटीलताहरुको वारेमा विस्तृत जानकारी रे सहित मार्चाका केहि शिर्ष नेताहरु समकक्ष पोखेका छन । ओलीले यसमा भारतीय पक्षवाट विशेष सहयोगको अपेक्षा समेत राखेको वुझिइएको छ । उनले त्यसका लागी आफु एक पटक भन्दा पनि किस्ता किस्तामा गरेर अघि वढनु पर्ने आफना वाध्यता सहितको प्रतिवद्धताहरु जनाइरहेका छन ।
साइड टकहरुमा सहभागी स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा काग्रेसले संसदमा पेश गरेको संशोधन विद्येयकमा मोर्चाको सरोकारलाई मिलाउदै अघि वढाउने प्रक्रिया अर्को हप्ता देखि सुरु हुदै छ । काग्रेस सभापति सुशिल कोईराला आज वेलुकि काठमाडौ आए लगतै भोली उनी सग यस वारेमा ठोसु छलफल हुदै छ । त्यस संगै संघियताको सन्दर्भमा हाल सम्म दुइ ओटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । एउटा संसदीय समिती वा अर्को उच्च स्तरीय राजनितीक समिती । स्रोतको भनाईमा १५ दिन वा वढीमा १ महिना भित्र यस वारेमा उक्त समितीले प्रतिवेदन दिए पछि फेरी अर्को संशोधन गरेर संघियतालाई मिलाउने काम हुने छ ।
यता आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले काग्रेसको संशोधनको प्रस्तावमा आफनो सरोकारलाई सम्बोधन गरे त्यसको विरोध नगर्ने तर आन्द्योलन पनि नरोक्ने रणनिती बनाएका छन । यता अर्को तर्फ पहिलो पटकमा संशोधन भए पछि हाल जारी नाका अवरुद्धलाई मोर्चाको अघोषीत सहयोग र भारतीय सदासायीतामा राती राती केहि घण्टाका लागी खुल्ला गर्ने दुवै पक्ष विच अघोषीत समझदारी बन्दै गएको छ । यसले एका तर्फ आन्द्योलन पनि जारी रहन्छ अर्को तर्फ आन्द्योलनको सम्बोधनको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ, स्रोत भन्छन, यो प्रक्रिया कम्तीमा पनि माघ अन्तिम सम्म वा फागुनको पहिलो हप्ता सम्म जान सक्ने आकंलन दुवै पक्षको छ ।
स्रोतका अनुसार संघियताको सन्दर्भ एकै चोटी निर्णयमा पुग्नका लागी प्रधानमन्त्रीका लागी स्वयंम एमालेकै कतिपय नेताहरु तथा काग्रेसका केहि नेताहरु वाधक बन्न पुगेका छन । हाल सम्म पुर्वमा सुनसरीको तल्लो भागको वारेमा विवाद सल्टीए पनि मोर्चाले मोरडको तल्लो भाग नआए सम्म आफुहरु नमान्ने प्रष्ट पारेका छन । प्रधानमन्त्रीले एकचोटी गर्दा पहाडमा उठने सक्ने केहि जातीय आन्द्योलनले फेरी अर्को समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै मोर्चा र भारतीय पक्षलाई विश्वास गर्न पटक पटक भन्न थालेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षहरु समकक्ष पश्चिमका लागी आफनै पार्टीका नेता भिम रावल समस्या भएको वताउदै , त्यसका लागी काग्रेसको तर्फवाट देउवा पक्षको कुरा मिलाइ दिनका लागी आग्रह गरेका छन । ओलीले देउवा पक्ष संग कुरा मिले पछि आफु रावललाई माइनस गरेर पनि कैलालीको थारु वाहुुल्य क्षेत्र तलको प्रदेशमा मिलाउने वचन वद्धताहरु व्यक्त गरीरहेका छन ।
यसरी जारी साईड सटकमा सहभागी नेताहरु भन्छन, सम्भव तह अर्को हप्ता देखि जारी आन्दोलनको सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने वातावरणको निर्माणको प्रयास हुदै छन । तर मोर्चाको आन्द्योलन चाही अहिले नै भन्ने रोकिदैनन । यस कुराको जानकारी सरकारी पक्षलाइ पनि गराइ सकिएकोे छ । संघियताको सम्बोधनका लागी संशोधन नभए सम्म जारी आन्दोलन चलीरहन्छ तर पहिलो संशोधन पश्चात हाल पुर्ण रुपमा अवरुद्ध नाका आशिंक रुपमा राती राती केहि घण्टाका लागी खुल्ला गर्न सक्ने संम्भावना वारेमा साकारात्मक छलफल भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।
BUDHIJIWI November 26, 2015 at 6:04 AM
TESO BHAYE HAMILE PURWA RA PASCHIM MA PANI SAMPURNA MADHESH KO BHAAG NA PAAUNE BHAYAU HAINA TA? ANI JHAPA KO TA CHHALFAL NAI BHAYENA KI KYA HO, JHAPA KO BAARE MA TA KEHI INTEL PAIENA TA?....NAVIN JI REPLY GARNU HOLA!!